Caanaha Naaska maxaa lagu badiyaa? – Sixah Academy
Home / Uncategorized / Caanaha Naaska maxaa lagu badiyaa?
Sixah Academy April 1, 2018	Uncategorized 2 Comments 1,147 Views
Hooyooyin badan waxa ay ka cawdaan in uu yar yahay soo saarka caanahoodu taasina waxy warwargalisaa hooyooyinka iyagoo u malaynaya in ilmahoodu aanu helayan quud ku filan.
Hadaba bal aan isla eego maxaa yareeya caanaha naaska? Maxaase lagu badiyaa?
Soosaarka caanaha naaska wax maamula dheecano jidka ah, sidaa awgeed waxa lagama maarmaan ah in ay hooyadu hesho hurdo ku filan, nasasho ku filan iyo cunto dheelitiran si ay ilmaheeda ugu soo saarto caano ku filan.
Intaas marka laga imaado waxa iyana muhiim ah in Naagku yahay Muruq, sidaa awgeed jiqid badan ayuun bay caano badan ku imanayaan. Hadii ilmaha yar aanu si wacan u jaqayn oo caanuhu aanay naaska ka baxay waxa la yaraynayaa soo saarida caano kale maadama caanihii hore ku jiraan. Tani waxa xal looga dhigaa in hooyadu caanaha naaska iska liso kadib marka uun ilmuhu jaqo si caano kale loo soo saaro.
Hooyooyin badan waxay ka cawdaan in ilmahoodu naaska u cabi waayay, Sababta ugu wayna waxa weeyan iyaga oo aan si wacan afka ugu galinayan. Tanina waxa xal u ah in hooyo kastaa ay lagama maarmaan tahay in ay barato qaababka kala duwan ee naaska loo siiyo ubadka.
Ma jiraan cunooyin badiya soo saarida caanaha naaska?
Biyo Badan ama Caano badan
Cuntooyinka galka leh sida (Sareenka, Qabandiga iyo Garoga)
Previous Nafaqada Aasaasiga Ah
Next Joonis Cadka ( Hepatitis B )
Masha Allah Allah ha idin abal mariyo wllo
Mnsh allah wll. Mahadsanid